ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရ : ဗီတာမင် D - Hello Sayarwon
ဗီတာမင် အားဖြည့်ဆေးတွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကိုတော့ ဘယ်လိုမှ အစားထိုးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကို လုံလောက်အောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်တော့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
တကယ်လို့များသင်က ပုံမှန်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့ စားစရာတွေမပြင်ဆင်နိုင်လောက်အောင် အလုပ်များတယ်ဆိုရင်တော့ မှန်ကန်တဲ့ဖြည့်စွက်စာ (အားဆေး) တွေဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ သင့်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်ဟာ essential ဗီတာမင် ၁၃မျိုးကို လိုအပ်သလို တစ်ခုချင်းစီကလည်း မတူညီတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုရင်တော့ ဗီတာမင် D က အထူးကို အရေးကြီးလာပါတော့တယ်။
ဘာကြောင့် ဗီတာမင် Dက အလွန်အရေးကြီးရတာလဲ။
ဗီတာမင် D က သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကို ကယ်လ်စီယမ်တွေစုပ်ယူဖို့ အားပေးပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်က သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ အရိုး၊ သွား၊ နှလုံး၊ ကြွက်သားနဲ့ အာရုံကြောတွေကြီးထွားစေဖို့ ကူညီနိုင်တဲ့ သတ္တုဓါတ်တစ်မျိုးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ တစ်ရက်ကို ကယ်လ်စီယမ် ၁၀၀၀ မီလီဂရမ်လိုအပ်ပါတယ။် ဒါကြောင့် ဗီတာမင် Dက သင့်ခန္ဓါကိုယ်ဟာ သင်စားသုံးလိုက်တဲ့အရာရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိနိုင်စေဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတာပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဗီတာမင် Dချို့တဲ့ခြင်းဟာ ကြီးထွားမှုပြဿနာတွေနဲ့ အရိုးဖွဲ့စည်းပုံ မမှန်ခြင်းစတာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကလေးရဲ့ အလေးချိန်ပေါ်လည်း သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး ကလေးဟာမွေးဖွားစဉ်တည်းက ဗီတာမင်ချို့တဲ့ခြင်းတွေကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကလေးငယ်အတွက်တော့ Rickets ဖြစ်နိုင်ချေများပြီး (ကျိုးပဲ့ခြင်းနဲ့ ပုံမမှန်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းကို ဦးတည်စေနိုင်) ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အရိုးကြီးထွားမှုတွေ နဲ့ ကလေးရဲ့ ကြီးထွားမှုတွေ နှောင့်နှေးစေတာမျိုး ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်းဟာ မွေးဖွားစဉ်ကာလမှ အရွယ်ရောက်သည်ထိ တောက်လျှောက် အရိုးကြီးထွားမှုနဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်D ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေထဲမှာတော့ အဝလွန်ခြင်း၊ ပုံမှန်ထက် အသားမဲခြင်း၊ ဆေးကုသမှုခံယူရခြင်း (စတီးရွိုက်၊ ကိုလက်စထရောနည်းပါးတဲ့ဆေးဝါးများ) နဲ့ fat malabsorption conditions တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်D ဘယ်လောက်ပမာဏ သင့်မှာ ရှိသင့်တာလဲ။
ကျွမ်းကျင်သူအများစုကတော့ သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ရရှိရမယ့် ဗီတာမင် D ပမာဏဟာ ၆၀၀ International Units (IU) နဲ့ ၂၀၀၀ IU ကြားမှာ ရှိသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်ကာလအထိ သို့မဟုတ် အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ကာလတစ်ခုထိ ဒီတိုင်းပဲ ဆက်ရှိနေသင့်ပါတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အရည်ပြားဟာ နေရောင်ခြည်ကို ဗီတာမင်D ထုတ်လုပ်ဖို့ သုံးစွဲနေတာဖြစ်လို့ ဗီတာမင် D ရရှိစေဖို့ နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့ရအောင် ဆယ်မိနစ်လောက် အပြင်ထွက်ပေးတာမျိုးလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နေရောင်ခြည်မှာပါတဲ့ UV အလင်းတန်းတွေဟာ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းကို မြင့်တက်စေတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသားမဲခြင်းတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်အများစုက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ အစားအသောက် သို့မဟုတ် အားဆေးတွေကနေပဲ ဗီတာမင် D ရယူသင့်ပြီး နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ရှားသင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားကြတာပါ။
ဗီတာမင် D ရဲ့ အစာရင်းမြစ်များ
ငါးကြီးဆီ ( fish liver oil ) ၊ အဆီများတဲ့ ငါးတွေနဲ့ ကြက်ဥတွေဟာ ဗီတာမင် D ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းစေတဲ့ အစားအစာတွေပါ။
ဗီတာမင် D ရရှိစေဖို့ ထိပ်တန်းအစားအစာတွေကတော့
ထရောက်ကဲ့သို့သော အဆီများ ငါး
Sultana Bran ကဲ့သို့သော fortified cereals
တိုဟူး၊ ပဲနို့နဲ့ ပဲနို့ဒိန်ချဉ်ကဲ့သို့သော ပဲနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ
ထောပတ်၊ နို့နဲ့ ဒိန်ချဉ်ကဲ့သို့သော နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊
ကြက်ဥ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အခြားသော စားစရာအများစုမှာကတော့ ဗီတာမင် D သဘာဝအတိုင်းမပါဝင်တာကြောင့် အများစုကတော့ ဒီအရေးကြီးတဲ့ ဗီတာမင်ကိုရဖို့ အားဖြည့်ထားကြရတာပါ။ အချို့သော ချိစ်တွေ၊ ဒိန်ချဉ်တွေနဲ့ cereals တွေဟာ ဗီတာမင် D ထပ်ဖြည့်ထားတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ အချို့မှာတော့ ဒီလို မရှိတာကြောင့် တံဆိပ်တွေကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ (နို့တွေအားလုံးကတော့ ဗီတာမင် D ပါဝင်အားဖြည့်ပြီးသားပါ)
သင်က ဗီတာမင် D လုံလောက်စွာ မရရှိမှာကို စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ဗီတာမင်D အားဖြည့်ဆေးတွေ ထပ်သောက်ဖို့ လိုမလိုဆိုတာကို သင့်ရဲ့ လက်ရှိပြသနေတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီး ဗီတာမင် D ချို့တဲ့မှုရှိမရှိ စမ်းသပ်သင့်ပါတယ်။ အားဆေးကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ အထိရောက်ဆုံးပုံစံဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် D3 သို့မဟုတ် cholecalciferol ဆိုတဲ့ စာတမ်းကပ်ထားတဲ့ ပါဝင်တဲ့ တံဆိပ်ကို သေချာရွေးချယ်ပါ။
: Baby center. Vitamin D in your pregnancy diet. http://www.babycenter.com/0_vitamin-d-in-your-pregnancy-diet_661.bc . Accessed: 25 November 2016
Bellamy’s organic. The3Most Important Vitamins for Pregnant Women. https://www.bellamysorganic.com.au/blog/the-3-most-important-vitamins-for-pregnant-women/. Accessed: 25 November 2016